Soo-saare Hoyga Internetka alaabta guriga Dhar Dibadda ah Alaabada beerta-cimilada caan-caanka ah ee rattan alaabta kafee qaxwaha ah
dejiyo 10 US $ 139.71 / Set
Isticmaal Khaas ah:
Qormadan Outsunny geeskeeda rattan waa wax weyn oo lagu soo kordhiyo jardiinada kasta, barandaro ama konteeriyada. Naqshaddan cusubi waa mid aad wax ku ool u ah oo siineysa quruxsan xarrago leh nolosha aad ku nooshahay. Iyada oo faashio ahqaab macquul ah iyo qaab casri ah, kursi rattan wuxuu ka kooban yahay waxyaabo rattan iyo aluminium frame, which makes it sturdy and can serve you for a long time.
magaca Product Alaabada beerta-cimilada caan-caanka ah ee rattan alaabta kafee qaxwaha ah
tirada Model TF-200C & TF-201T
size Table:dia 60*70cm;Chair:57*59*85cm
Waxyaabaha Aluminium ffinanka iyo banaanka PE rattan / wicker
xarig U adkeysan UV iyo biyuhu
Advantage Ku habboon dibadda & gudaha
Delivery 25-30 maalmood kadib helitaanka deebaajiga hal 40 "HQ
1. ku dalbo weel buuxa
2. Waxaan kaloo aqbalnaa isla amar haddii aad ka soo qaadan karto warshadeena.
Where in la isticmaalo
Bannaanka (Beerta, Patio, makhaayadda, Hoteel, Villa, Xeebta, Dalxiis, Dal gaar loo leeyahay, Yard, Naadi, Bar, barkad dabaal, Bistro, Lawn, Balcony, Hawada furan, Badweynta, Biyo-galeenka, Beeraha, Wadada, Baqaarada, aag dalxiis , Terrace, Barxad, Dhacdooyin, Aroos, Kondomiyaal, Ganacsi, Deganeyn, Munaasabado, Bandhigyo Shirkadeed, Dekad, Yacht, Bannaanka dibedda lagu madadaasho) iyo dhammaan goobaha kale ee firaaqada.
Gudaha (Cafe, Qolka fadhiga, Qolka kulanka, Salon, qolalka jiifka, qolalka jiifka, Bandhigga, Bandhiga, goobta madadaalada ee shirkaddu leedahay, Qolol, Qolka xafiiska). Afar xilli oo la adeegsaday; Waxay la qabsan karaan 20 ka hooseeya eber ilaa 60 cimilada, oo waa biyo-celin iyo hawlo-degdeg-u-engejinta, xitaa lagu meeleeyay hareeraha barkadda dabbaasha, saameyn kuma yeelan doonto isticmaalkooda. Iska caabin roobka dibedda, qoraxda, barafka, iwm.
Waxay kuxirantahay badeecadaada laguu habeeyay, waxay noqon kartaa 10 maalmood ilaa 30 maalmood,Alaabada caadiga ah, waxaan ku gaarsiin karnaa oMarka laga soo tago sida aan haysanay, inta badan waxyaabaha aan ku bixin karno 15-20 maalmood oo shaqo gudahood! waqtiga saxda ah ee gaarsiinta waxaa lagu cayimay qaansheegta oamar nce waa // conadag / i / ied.Q3. Muddo intee le'eg ayay qaadataa ka hor intaysan macaamiisha qaadan alaabtu?
Walxaha badankood waxaa loo baahan yahay in la sameeyo oamar nce waa // conwaxyaabaha / i / ied.Stock waxyaabaha waa la heli karaa xilliyo kaladuwan awgeed, fadlan coshaqaalahayaga kala xiriir macluumaad faahfaahsan.Q5: Sideen ku heli karaa oraah una habeeyaa?
qolka jiifka jiifka
gogosha qolka jiifka
gogosha sariirta qolka jiifka ah
jajabinta alaabta guryaha
gudaha bistro set